Tattoos yeHawaiian - Cool Hawaiian Tribal Tattoos Kwevakadzi
Tattoos Art ideas Team Dai 14, 2017
1. Anoshamisa Stingray kuHawaiian Tribal Tattoo pamapfudzi kumashure kwevakadzi
2. Inonakidza yakaoma muHawaiian Tribal Tattoo pfungwa kuvasikana vari pamutsipa nebandauko
3. Pamusoro pemadzimai - Akanaka maitiro eHawaiian Tribal Tattoo
4. Guru rakawanda raHawaiian Tribal Tattoo rakagadzirirwa kumashure kwevakadzi
5. Inonakidza yakawandisa yakawanda yeHawaiian Tribal Tattoo yakagadzika pamakumbo echikadzi
6. Catchy zvakanyanya black black Hawaiian Rugare rwefudzi rudzi rwemavara rweVasikana
7. Vakasungirirwa vakaiswa muHawaiian Tribal Tattoo pfungwa pamakumbo echikadzi
8. Rakadzika rakapenya nyeredzi reHawaiian Tribal back shoulder tattoo pfungwa dzeVasikana
9. Dhizha rakanaka hibiscus nenyoka Hawaii Tribal Tattoo pfungwa dzeMadzimai pamapfudzi kumashure
10. Kunyanya kuisa mutema weHawaiian Tribal Tattoo pfungwa kumusana nemutsipa wevakadzi
11. Mifananidzo yakawanda yakanyanyisa nyemba yeHawaiian Tribal Tattoo pfungwa pamusoro kumashure yeVasikana
12. Chimiro chakanaka cheHawaiian Tribal Tattoo ne hibiscus kugadzirwa pamusana pevakadzi
13. Inoshamisa zvinoshamisa zveHawaiian Tribal Tattoo zvakagadzirirwa pafudzi reVasikana
14. Inoshamisa yeHawaiian Tribal Tattoo pfungwa pamusoro pedumbu revakadzi
15. Aesthetic kutarisa orchid Hawaiian Tribal Tattoo pfungwa dziri kumashure kwevakadzi
16. Inotora Tattoo yeHawaian Tribal kumusana weVasikana nevakadzi
17. Kunyoresa kufara kweHawaiian Tribal Tattoo ne orchid pafudzi reVasikana
18. Yakanakisisa stingray uye turtle Hawaiian Tribal Tattoo kugadzirisa kumashure kwevakadzi
19. Pamadzimai- Mutsvuku weHawaiian Tribal Tattoo mushure nemutsipa
20. Kutora hutema hwakaita nyeredzi yakaitwa neHawaiian Tribal Tattoo mishonga pamutsipa
21. Kutora maoriki orchid Hawaiian Tribal tattoo mishonga pachibonde cheMadzimai
22. Inonakidza zvikuru maHawaiian madzinza shure tattoo mazano kune vakadzi nevanasikana
23. Inotarisa yakazara nyeredzi yeHawaiian tattoo nekeji pfungwa pamusoro pevakadzi vechipfuva
24. Chimiro chekuHawaiian chinyorwa chakagadzirwa pamapfudzi kumashure kwevakadzi
Mavara echiHawaii chimwe chezvinyorwa zvemavara zvemazuva ano. Mavara echiHawaii anoratidza hupfumi tsika netsika dzeHawaii Islands kuburikidza nezviratidzo zvakasiyana-siyana uye maitiro. Varume nevakadzi vose vanopfeka matanho aya sechisungo kune tsika idzi dzakadzama. Kazhinji vanhu vakanyora muviri wavo wose kubva pamusoro kusvika kunezvigunwe. Kunyange zvazvo vakadzi vasina kuwana muviri wakanyora pasi, vakagamuchira chikamu chakanaka chekutema mifananidzo. Chimwe cheimwe chetoto chaifananidzirwa uye chakanyatsoreva zvakadzama. Nenzira dzechirevo izvi zvinyorwa zvakaitwa chete mumusi mutsvuku.
Inki yekare yaiva kusanganiswa kwemhangura uye sosi uye yakashandiswa mumakwenzi akadzika akaitwa mumuviri wemunhu ndokubvumira kuoma kuitira kuti mishonga idzi dzisvike. Gare gare inki yakaitwa nesanganiswa yekukui nuts uye jukoni jisi. Zvinyorwa zvinowanzobatanidza kuenzaniswa kwakasiyana-siyana kwemadzinza emarudzi nemifananidzo yakawanda yemifananidzo yemhuka dzomudzimu, maruva anopisa, kana kuti Hawaiian Tiki Gods. VaHawaii vakataura nezvekunyora matanho sekuti 'kakau' uye kutora mifananidzo pamazuva akwegura kwaiva chiratidzo chekushinga kwavo sezvavanenge vachitambura zvakanyanya.
Nzira dzezvemagariro dzinoshandiswa magiramu emakemikari uye mitsara yakasiyana-siyana yekugadzirisa mitsara muinki yakasvibirira kuratidza kuzvipira kwechitendero, tsika dzekufambisa, ushingi muhondo, chimiro, mazana, uye nhaka. Zvisinei, matanho emazuva ano eHawaiian anounza mavara akasiyana-siyana uye ane ruzivo rwakawandisa nekuda kwesimba rekumadokero. Aya maitiro emitambo akanga akaenwa nokuda kwezvinangwa zvakasiyana-siyana zvakadai sokuzivikanwa kwomunhu oga, kudzivirirwa, kuyeuka vadikanwa, kupfeka, kunamata, mhuri yefa uye yehupenyu semurwi. Zvose zvakagadzirwa zvakasiyana uye chikonzero chekuti munhu anosarudza tattoo yakanyatsonaka.
Zvisinei, pane zvishoma zvinyorwa zveHawaiian tattoos zvinowanzoshandiswa, zvakadai se:
Gecko: Chimwe chezvinhu zvakakurumbira uye zvakada kufanana muHawaiian tattoo ndiGecko sezvo zvinonzi zvinemasimba masimba. Kuwedzerwa kwemaHawaiian emagadzirirwo emagecko kunoita kuti zvive zvakanaka uye zvinokwezva.
Sharks: ichi chisikwa chine simba chinoonekwa sechitsvene nevakwegura uye chiratidzo chekudzivirirwa kune anogunzva.
Tiki: Tiki inotendwa kuti ndiyo munhu wekutanga, nyanzvi yemadzano evanhu. Tiki inokwanisa kunhuwira njodzi nekuda kwekunzwisisa kwayo kunhuwirira.
Shells: Munguva dzakare-kare, mabhesi akashandiswa semhando yemari uye naizvozvo inked sezvaanoita kubudirira uye pfuma.
Gungwa reGungwa: Gungwa turtle chiratidzo cheupenyu hurefu uye kubereka.
Tropical flowers: Orchids, vanhurium uye hibiscus inowanzoshandiswa muTawaiian tattoos. Orchid inomiririra rudo, runako, hupfumi, uye hukuru. The humanrium iri ruvara rutsvuku rwuri kuratidza kugamuchira vaeni, mutsa, uye ushamwari. Hibiscus, iyo inonyanya kuzikanwa nemaruva ekugadzirwa kweHawaiian inosanganiswa nezhizha uye inofadza.
Zvimwe zvinowanzosarudzwa ndezveHula vatambi, Leis uye Volcanoes.
ChiHawaiian tattoo zvirongwa zvakakura uye zvakakura zvichifananidzwa nemamwe maPolynesian tattoos, zvichiita kuti pasina mubvunzo zviitiko. Tora imwe, kana iwe uchida chaizvo maHawaiian maitiro. Sarudza iyo iyo inomiririra iwe kunyanya uye inokoshesa kwehupenyu hwako hwose.
Tags:hawaiian tattoos tattoos for girls tribal tattoos
elephant tattoocompass tattoohenna tattoomwedzi tattoosinfinity tattoosemicolon tattoowatercolor tattooangel tattoosshamwari yakanakisisa tattoosbirds tattoosPeacock tattoobutterfly tattooscross tattoosrip tattoosshumba tattoomaoko tattoostribal tattooszuva tattoosback tattoosFeather Tattoocat tattoosdreamcatcher tattoostattoos for girlsrose tattooscherry blossom tattoocouple tattoosarrow tattoohanzvadzi tattoosfoot tattooszodiac zviratidzo zviratidzocute tattoostattoo yezisotattoo ideaskorona tattoostattoos kuvanhunjiva tattoosSkull tattoosflower tattooschifuva tattoosAnkle Tattoosarm tattoosAnchor tattoossleeve tattoosHeart Tattoosdiamond tattoodragon tattooeagle tattoosmehndi designneck tattooslotus flower tattoo